आजबाट घट्यो विद्युत् महशुल, अब बिजुली बाल्दा कति लाग्छ शुल्क? - ramechhapkhabar.com
आजबाट घट्यो विद्युत् महशुल, अब बिजुली बाल्दा कति लाग्छ शुल्क?
काठमाडौं, १ मंसिर।
विद्युत् नियमन आयोगको गत कात्तिक १० गतेको निर्णयअनुसार आजबाट बिजुलीमा नयाँ महशुल लागू भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजबाट नयाँ महशुल दरअनुसार बिलिङ गर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो उपभोक्ताको शुल्क घटाइएको छ ।
अब लाग्ने शुल्कको तालिका